व्यावहारिक सुझाव, प्रविधी र सल्लाह: सारांश कसरी लेख्न
व्यापार, मार्केटिङ, मनोविज्ञान र आत्म-विकास बारे पुस्तकहरू, तपाईंले, क्षितिज चौडा व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकास प्रवर्द्धन गर्न मदत गर्नेछ कि धेरै प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ। तथापि, आधुनिक मानिस, स्थायी रोजगारीको दृश्य यो वा त्यो पुस्तक पढ्न पर्याप्त समय सधैं छ। तसर्थ, sammari को वृद्धि लोकप्रियता। के छ र कसरी एक सारांश लेख्न, हामी यस लेखमा विचार गर्नुहोस्।
सारांश (sammari) के हो?
Sammari पाठ को मात्रा को एक सिंहावलोकन प्रस्तुत। यो काम को आधारभूत विचार conveys र विवरण छोड्छ। sammari कहिलेकाहीं उठाएको विवादहरू सिफारिसहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र कसरी किन sammari लेख्न? यसलाई सरल छ: यो पाठ को मुख्य लक्ष्य - पाठक यो प्रत्यक्ष ज्ञान बिना एक विशेष पाठ फाइल को एक विचार दिन। को संक्षिप्त सारांश धेरै क्षेत्रमा प्रयोग सामाग्री, खेल प्रतियोगिताहरु को सबै भन्दा राम्रो समय को पनि विवरण - यो पनि sammari केही तरिका छ।
हामी मुद्दा को खुलासा गर्न अगाडि बढ्न अघि, एक सारांश कसरी लेख्न, यो प्रस्तुति ढाँचा को merits बारेमा अलि बढी सिक्नुपर्छ:
क्षितिज विस्तार। यो पुस्तक, लेख वा प्रकाशनहरू देखि आधारभूत जानकारी प्रदान गरेर यो योगदान पुग्छ।
समय बचत गर्नुहोस्। काम को संकुचित व्याख्या केही आधारभूत अवधारणाहरु 10-15 मिनेट पढ्न सकिन्छ।
चयन गर्नुहोस्। Sammari आफ्नो विकल्प निर्णय गर्न पाठक मदत।
बन्धन सामाग्री। एकदम अक्सर पढ्न र उत्पादनहरु को थोक को संक्षिप्त खाता विशेषताहरू र सम्झन मदत गर्छ भूल "को समतल मा सबै राख्नु।"
आज, धेरै विद्यार्थी एक सारांश कसरी लेख्न सोच छन्। विद्यार्थीहरूको समीक्षा लेखन अक्सर विदेशी भाषा पाठ आवश्यक sammari भनेर संकेत गर्छ। यस्तै प्रवृत्ति यसको उद्देश्य छ:
पाठ को एक संक्षिप्त समीक्षा लेखन शब्दावली वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ।
Sammari अक्सर भाषा प्रवीणता तमाम स्तर को एक विश्वसनीय अनुमान प्रदान गर्दछ मुख्य मापदण्ड हो।
अंग्रेजी मा सारांश, विद्यार्थी लगातार विदेशी मा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता दिन आदेश लिखित पहिले प्रदान जानकारी छलफल भएको थियो के साकार। Sammari अक्सर निबंध, निबन्धहरू, पाठ विश्लेषण वा निबंध जस्ता काम प्रमुख घटक को छ।
सामान्य मा, तीन मुख्य उप सारांश छन्:
जानकारीमूलक। अक्सर वैज्ञानिक पत्रकारिता लागि प्रयोग। तिनीहरूले एक साधारण विषय सामाग्री प्रदान गर्नुहोस्। विशेष जोड अनुसन्धान परिणाम मा राखिएको छ।
प्रशासन। पाठ मुख्य समस्या र आफ्नो समाधान को विधिहरू, पूर्ण sammari सिफारिसहरू आवश्यक भएमा वर्णन गर्दछ। यस्तो सारांश व्यापक प्रबन्धकहरू र राजनीतिज्ञ बीचमा प्रयोग गरिएको छ।
अनुमानित। थप एक समीक्षा जस्तै संकुचित प्रस्तुति यस प्रकारको। पाठ मात्र होइन प्रमुख जानकारी, तर पनि उत्पादन को मूल लेखक एक निश्चित लक्ष्य पुगेको छ भने कि, दृश्य प्रदान गर्दछ।
पाठ को संक्षिप्त प्रदर्शनी कामहरू अध्ययन, यो धेरै पूर्णतया त्यहाँ एक सारांश छ भनेर बुझ्न छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। कसरी लेख्न? राम्रो sammari को उदाहरण केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ:
एक succinct सारांश सामग्री objectively पब बताउन पर्छ।
Sammari पाठक गर्न संक्षिप्त गर्न, आधारभूत जानकारी छ।
विचार को पुनरावृत्ति, विस्तृत वर्णन र उदाहरण अनुपस्थित हुनुपर्छ।
Sammari आधारभूत विचार खुलासा गर्नेछु।
यो मूल स्रोत उद्धृत गर्न असम्भव छ।
यसलाई व्यक्तिगत सर्वनाम लेख्दा प्रयोग गर्न सकिँदैन।
को संकुचित प्रस्तुति को मात्रा मूल को ¼ भन्दा कुनै थप हुनुपर्छ।
यो फरक व्याख्या गर्न सकिन्छ जो प्रस्ताव, नत्याग्ने राम्रो छ।
प्रत्यक्ष वाणी सधैं अप्रत्यक्ष मा remade भइरहेको छ।
लिखित सारांश रूपमा?
एक व्यक्ति वैज्ञानिक कागजात को एक मात्रा लिखित छ मानौं। तपाईं संक्षेप, "छोटो निचोड" विशेषताहरू मा प्रतिलिपि पर्छ - यो sammari हुनेछ। एक सारांश कसरी लेख्न:
विषय र उद्देश्य। यो के, वास्तव मा, एक विशेष उत्पादन सिर्जना निर्धारण गर्न आवश्यक छ। "श्रम मुख्य विषय - ..... र पनि यो र त्यो बारेमा भन्नुभयो।": जब एक वा बढी विचार, तपाईं कुराकानी गर्न सक्छन् र लेख्न विवरणहरू रंग आवश्यक छैन: 2-3 प्रदान गर्दछ - पर्याप्त भन्दा बढी।
मुख्य बुँदाहरू। तिनीहरूले वास्तविक अर्डर लेखनमा दिनुपर्छ। वैज्ञानिक काम टाउको 10 थियो भने, क्रमशः, प्रत्येक जो विशेषताहरू एक विशेष अध्याय discloses 10 sammari subheads, हुनुपर्छ।
सिफारिस। सिफारिसहरू अक्सर सामान्य रूपमा प्रयोग sammari, तर केही अवस्थामा यो पनि आवश्यक छ। सिफारिसहरू अक्सर दृष्टि, दृष्टिकोण, सल्लाह को सिद्धान्त मा लेख्नुहोस्। यो जानकारी 3-5 वाक्य राख्नु पर्छ।
उदाहरणका सिफारिसहरू सारांश
उदाहरणका लागि, विषय मा एक treatise को लेखक "को समाजीकरण र व्यक्तित्व को गठन मा टेलिभिजनको नकारात्मक प्रभाव।" पछि काम pomace मुख्य विचारहरू आफ्नो सिफारिसहरू, स्थिति को एक सामान्य दृश्य, अनुसन्धान र सल्लाह को परिणाम समावेश गरिनेछ जसमा सारांशित गर्न सकिन्छ। मामला मा तपाईं निम्न सिफारिसहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
"वर्तमान टिभी बच्चा र किशोर दर्शक मा नकारात्मक प्रभाव (स्थिति को एक साधारण दृष्टि) छ। यस दिन र प्रधानमन्त्री समयमा टेलिभिजन च्यानलहरू antisocial व्यवहार वर्ण (अध्ययन) संग दृश्य निरीक्षण गर्न सक्छन्। यो राज्य र स्थानीय स्तर (परिषद) मा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था ईथर को परिचय मार्फत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। "
एक सारांश कसरी लेख्न को प्रश्नको जवाफ, त्यो सही छ भने - एक-पृष्ठ निबंध मा 100 पृष्ठहरूमा काम गर्नाले।
एक सारांश कसरी लेख्न? व्यावहारिक सल्लाह
सिफारिसहरू केही प्रयोग गर्न sammari महत्त्वपूर्ण लेखन बारेमा थप:
पृष्ठ संख्या। प्रत्येक उपशीर्षकमा sammari (जो काम को टाउको गर्न पत्राचार) गर्न अर्को तल पृष्ठ को मूल पाठ कोष्ठक मा संख्या राख्न सकिँदैन। पाठक रुचि छ भने, यो पाउन सजिलो छ।
कम शब्दहरू। आवश्यकता को मूल विचार रूपमा छोटकरीमा सकेसम्म: यो राम्रो छ सानो मात्रा sammari, त्यसैले।
समझ। पाठक शाब्दिक "उड" र बुझ्न र हरेक वाक्य पनि बुझ्न सारांश बुझ्नुपर्छ।
लेखन भाषा। त्यहाँ जटिल शब्दावली पूर्ण-लम्बाइ अनुच्छेद मा वाक्य सञ्चालन र लेख्न कुनै आवश्यकता छ। यो सजिलो लेखिएको छ, राम्रो काम मानिन्छ।
एक छुट्टै दस्तावेज। यो कि sammari सम्झना हुनुपर्छ - छुट्टै अर्थ कागजात, त्यसैले यसलाई मूल आधारभूत सार राज्य महत्त्वपूर्ण छ।
विवरण बिना। धेरै प्रदर्शन गर्ने मूल विस्तार किन retell, आफ्नो sammari मा भन्न केहि डराउँछन्। यसले मुख्य बुँदाहरू पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ, छैन गर्नुपर्छ। पाठक विवरण जान्न चाहनुहुन्छ भने, यो सम्पूर्ण काम पढ्न हुनेछ। त्यो के sammari आवश्यक छ।
यो ठूलो मात्रा गर्न आउँछ विशेष गरी जब sammari सिर्जना गाह्रो। तर यो कौशल सिकाउँछन् छोटकरीमा बोल्न र कुनै पनि समूह मा मूल्यवान छ के बिन्दु, रूपमा, बस जीवनमा उपयोगी छैन।
के नदी लायक कजान छ। प्राकृतिक कजान आकर्षण
Schoolchildren केही सुझाव: जब वर्ग मा नरमाइलो के
वर्ग कीराहरू: उदाहरणहरू प्रकार, सुविधाहरू
स्थान: यो यूरेशिया अन्य महादेशमा को सम्बन्ध मा स्थित छ
कसरी आफ्नो हात संग पास्ता को एक क्रिसमस रूख बनाउन
गाउँमा र प्रेम बारे सोभियत फिलिम। गाउँमा बारेमा सबै भन्दा राम्रो फिल्म
कसरी एक क्रल र पछाडिको पछाडि सच्याउने?
के र कसरी घनिष्ठ ठाउँ दाढी गर्न?
Dota2हीरो: Visp। "Dota 2": Visp लागि खेल्न कसरी
Bronchicum C: प्रयोग, समीक्षा र एनालॉगहरूको लागि निर्देशनहरू
कसरी विषाक्तता "Fosfalyugel" लिने?
समुद्री डिजेल इन्जिन र आफ्नो मरम्मत। समुद्री डिजेल इन्जिन को इन्धन सिस्टम